जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओमा रेकर्ड ब्रेक, हालसम्मकै उच्च आवेदन
असोज १४, काठमाडौं । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालको आईपीओमा रेकर्ड ब्रेक भएको छ । उक्त कम्पनीको आईपीओमा ८ लाखभन्दा बढीले आवेदन दिएसँगै रेकर्ड ब्रेक भएको हो । हालसम्म यतिसंख्यामा आईपीओको लागि आवेदन परेको थिएन ।
विक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटलका अनुसार बुधवार साँझ ५ बजेसम्म ८ लाख १६ हजार ३६ जना आवेदकले २ करोड २६ लाख २१ हजार ७०० कित्ताका लागि आवेदन दिएका हुन् । जुन मागभन्दा ८ दशमलव २८ गुणा बढी हुन आउँछ । बुधवार राती १२ बजेसम्म आवेदन दिन सकिने हुदाँ यो संख्या अझ बढ्ने विक्री प्रबन्धकको भनाई छ ।
कम्पनीले असोज ११ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि २७ लाख ३० हजार कित्ता सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्कासन मार्फत विक्री खुला गरेको हो ।
उक्त कम्पनीले कुल ३० लाख कित्तामध्ये ४ प्रतिशत अर्थात १ लाख २० हजार कित्ता कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरी ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख ५० हजार कित्ता सामूहिक लगानीकोषलाई बाँडफाँट पश्चात बाँकी रहेको शेयर सर्वसाधारणमा विक्री खुला गरेको हो ।
मागभन्दा बढी आवेदन परेकाले छिटो अवधि असोज १४ भित्रै कम्पनीको आईपीओ विक्री बन्द भएको छ । यो आईपीओ खरीदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था थियो ।
उक्त कम्पनीले यो आईपीओ विक्री गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट भदौ २४ गते अनुमति पाएको थियो । हाल संस्थापकतर्फको रू. ७० करोड चुक्तापूँजी रहेको उक्त कम्पनीको आईपीओ विक्री पश्चात रू. १ अर्ब चुक्तापूँजी कायम हुनेछ ।
कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १०४ दशमलव शून्य २ रहेको छ भने प्रतिशेयर आम्दानी रू. २ दशमलव २५ रहेको छ ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासमा ८३ % नाफा कमाएको सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण [२०७७ कार्तिक, १०]
विजया दशमी : टीका लगाउने शुभ साइत १० : १९ बजेबाट[२०७७ कार्तिक, १०]
यती एअरलाइन्सले ल्यायो जोडीलाई बडादसैं अफर [२०७७ कार्तिक, ९]
थप २८५६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, मृतकको संख्या ८४७ पुग्यो[२०७७ कार्तिक, ९]
पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि [२०७७ कार्तिक, ९]
१३.६८ % लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स : कम्पनी विश्लेषण[२०७७ कार्तिक, ९]